Myanmar Gazette » US-Myanmar Exchange and Gala Dinner – Los Angeles	12
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဂုဏ်ယူပါတယ် သဂျီး။ သဂျီးက ဧရာမအလုပ်ကြီးကို လုပ်ခဲ့တာပဲ။
Alinsett @ Maung Thura says: အန်တီပြုံးးး ဒီပိုစ့်ကို ဘာသာပြန်ပေးပါလားငင်
kai says: နောက်တပါတ်မှာ.. နောက်တခုထပ်ရှိသေးတယ်..။
ဆရာမရွှေကူမေနှင်းစာတွေ… ပြုံးမမစာတွေ.. လွှတ်တော်ထဲ တန်းရောက်ကုန်တာပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .သဂျီးရယ် ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီသတင်းစာလေးများ တစ်စောင်လောက် မရနိုင်ဘူးလား။ ကိုယ့် ဆောင်းပါးလေး ပါတော့ သိမ်းထားချင်တာပေါ့။
padonmar says: Congratulations ပါ သူကြီး။
မြစပဲရိုး says: ကိုယ့်ပုံလေး လူဝင်အောင် ကြည့် အောင် ဒါထက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ခေါင်းစဉ် လေးများ တပ်ပါတော့။
kai says: ပိပိလေး…ပါပါတယ်..။
လောလောဆယ်တော့.. ဇွန်လမှာ.. ထုံးစံအတိုင်း…. ရယ်လို့..။ ထင်တာ..ထင်တာ..။
ခင်ဇော် says: ခေါင်းစဉ် ကြည့်ပြီး မဝင်ဖြစ်တာ။
kai says: http://azmtv.com
Ma Ma says: အပေါ်က စာတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဖတ်
မသိသလိုလို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: သူဂျီး ပုံပါတယ်​ဆိုလို့
ပြူးပြဲကြည့်​​နေတာ ဘယ်​မှာလဲဟဲ့ ငါ့သူကြီးက Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12185
Alinsett @ Maung Thura says: အပေါ်ကနေ ရေ… ဒုတိယမြောက်ပုံမှာ…
.ပြောသာပြောရတယ်… အဲဒီပုံထဲက သူကြီးက ကျနော်တို့ရွာထဲက..(စာနဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့)သူကြီးနဲ့ မတူရေးချ မတူ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.